HUAWEI Y6p specifications | HUAWEI Myanmar
HUAWEI Y6p Specification
Approx 185 g (including the battery)
*Witharounded corners design on the display, the diagonal length of the screen is 6.3 inches when measured according to the standard rectangle (the actual viewable area is slightly smaller).
HD+ 1600 x 720 Pixels
*Witharounded corners design on the display, the resolution of the screen is 1600 x 720 Pixels when measured according to the standard rectangle (the actual viewable area is slightly smaller).
4 x Cortex-A53 2.0 GHz +4x Cortex-A53 1.5 GHz
Micro SD Card, up to 512 GB
13 MP (f/1.8 aperture) +5MP (Wide Angle Lens, f/2.2 aperture) +2MP (f/2.4 aperture) , AF
8 MP, f/2.0 aperture, FF
4900 mAh (rated value), 5000 mAh (typical value)
The standard charger supports 5V / 2A
Dual SIM version：
4G FDD LTE: Bands 1 /2/3/4/5/7/ 8 / 20 / 28
4G TDD LTE: Bands 34 / 38 / 39 / 40 / 41 (2535 - 2675 MHz)
Single SIM version:
Card reading mode, point to point mode, and card simulation mode (UICC and HCE) are supported.
Audio File Format: mp3, mid, amr, awb, 3gp, mp4, m4a, aac, wav, ogg, flac, mkv
Phone (Built-in battery)
Protective Case (Dependent on market)
Warranty Card (Dependent on market)
TP protective film (Attached on the phone before delivery)
Battery cover protective film (Attached on the phone before delivery)
*Contact the sales channel foramore detailed list.
*အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည် ထုတ်ကုန်၏ ဒီဇိုင်းကို အခြေခံထားသော သဘောတရားအရ စံနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်တိကျသည့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များ၊ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် HUAWEI သည် အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်ရေးသားနိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်များ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့် တကယ့်ထုတ်ကုန်၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမည် ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ရေးသား ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။